Home Wararka (Balatweyne) Dad loo soo qabtay Dilkii Nabadoon Cali Dheere
Ciidamada booliska magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan oo saacadihii ayaa magaalada ay ka galeen howlgallo xoog leh soo qabqabtay dad badan oo looga shakisan yahay inay ku lug-lahaayeen Nabadoon xalay lagu dilay xaafad ka tirsan magaalada.
Taliyaha booliska degmada Beledweyne Bishaar Xuseen Jimcaale oo shir jaraa’id qabtay ayaa sheegay in tiro dad ah ay u soo qabteen dilkii xalay Beledweyne loogu geystay Allaha u naxariistee Cali Macalin Maxamuud (Cali Dheere).
Marxuumka oo ka tirsanaa ergadii wax kasoo dooratay baarlamaanka Soomaaliya ayaa xalay lagu dilay xaafada Xaawo-Taako ee magaalada Beledweyne, waxaana mas’uuliyadda dilkiisa sheegatay kooxda Al-Shabaab.
Taliye Bishaar ayaa sheegay in dilkaas kadib ay howlgallo culus magaalada ka bilaabeen, isla markaana ay soo qabteen dad badan oo lagu tuhmayo inay ka mid yihiin xubnaha Al-Shabaab u jooga magaalada.
Beledweyne waxaa mar sii horeysay ka bilaabatay beegsiga ergadii wax ka soo dooratay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana magaaladaas ka jirta cabsi amni oo xoog leh
Previous articleAgaasimaha Madaxtooyada iyo K/Xigeenkiisii ayaa Xilalkii Loo Magacaabay la Wareegay.
Next articleCabdullahi M Shirwac oo Xamar Ku Geeriyooday AHN.
Ciidammada Masar oo xiray waddooyinka gala fagaaraha Taxriir